महन्त उपप्रधानमन्त्री, रेशम चौधरीको के हुन्छ ? « Ok Janata Newsportal
महन्त उपप्रधानमन्त्री, रेशम चौधरीको के हुन्छ ?
काठमाडौं । प्रधामनमन्त्री केपी शर्मा ओली र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच सत्ता साझेदारीको छलफल सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको छ । केही दिनअघि जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकूरले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई जानकारी नदिइ सरकारसँग वार्ता गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका १७ जना सांसदलाई फकाउन सकेपनि सरकार बन्ने निश्चित छ । तर, यता एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समूह प्रधानमन्त्रीका त्रियाकलाप प्रति सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एकै ठाउँमा उभिएका पूर्व एमालेहरुले बैठक सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली नै पार्टीलाई सही दिशामा लैजान अग्रसर हुनुपर्ने भएपनि त्यो हुन सकेको छैन । उल्टै आआफ्ना निर्णयहरु ग्र्ने, गुट भेला बस्ने लगायतका क्रियाकलापले प्रससय पाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली सत्ता कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने खेलमै उद्दत भएकोले एमालेको विवाद लम्बिँदै गइरहेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष ठाकूरलाई उपप्रधानमन्त्री दिने ओलीको तयारी रहेको छ । यद्यपि सांसद रेशम चौधरीको रि हाइ पनि प्रमुख मुद्धा बनेको छ । चौधरीलाई बाहिर निकाल्ने यो अवसरको जसपाले भरपूर उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सिके राउत, विप्लवलाई वार्तामा ल्याइसकेको बेला चौधरीलाई पनि रि हाइको तयारी भइरहेको छ ।
जसपाका नेताहरु यतिबेला ओली पक्षसँग निरन्तर वार्ता र संवाद गरिरहेका छन् । ठाकूर ओलीको आश्वासनमा मग्न भएका छन् ।